Guddiga madaxa banaan ee dib-u-eegista Dastuurka oo lagu wareejinayay nuqulo ka mid ah dastuurka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddiga madaxa banaan ee dib-u-eegista Dastuurka oo lagu wareejinayay nuqulo ka mid ah dastuurka
A warsame 18 March 2015 18 March 2015
Mareeg.com: Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ka qeyb galay kulan Guddiga Madaxa banaan ee dib-u-eegista Dastuurka loogu wareejinayay nuqulo ka mid ah dastuurka qabyada ah, si ay dib u eegis ugu sameeyaan.
Kulanka oo lagu qabtay xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirka Dastuurka, Guddiga joogtada ee ah baarlamaanka u qaabilsan dastuurka, waxaana Guddiga madaxa banaan lagu wareejiyay nuqulo ka mid ah dastuurka, gaar ahaan cutubyada 1-aad iyo kan 4-aa oo ka hadlaya maqaamka ay yeelaneyso caasimadda, jinsiyadaha, xaduudaha iyo xuquuqda uu leeyahay muwaadinka.
Caasho Geelle, Guddoomiyaha Madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in dib u eegista dastuurka ay ku saleydoonaan danta dalka iyo dadka.
Wasiirka Dasuurka ee xukuumadda Soomaaliya, Xuseen Sheekh Maxamed ayaa tilmaamay in dastuurka uu dalka yeelanayo mid ku saleysan sinaan iyo cadaalad, isla markaana laga saari doono waxkasta oo ka hor imaanaya jiritaanka danta Ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaankooda.
Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa dar daaran u jeediyay guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka, isla markaana ay xilhdibannada gacan ku siin doonan gudahasha howlaha loo xilsaaray.
Madaxweyne ku-xigeenka Ciraaq oo ka digay taageerada Iran siiso Shiicada
Maamulka Puntland oo qalab caafimaad ka helay Australia